Canon EOS R7 ga-abịarute na 2022 ka akara ngwụcha nke igwefoto EOS M - 【 Comparison】 2022
Canon EOS R7 na-abịa na 2022 iji gosi njedebe EOS M igwefoto
Canon PG-545 + CLI-546 BK / C / M / Y katrij ink multipack ojii + agba 8ml + 9ml ORIGINAL ...
Nkà na ụzụ obibi akwụkwọ: inkjet; Mpụta akwụkwọ: ibe 180; Agba mbipụta: Black, Agba
Ruo ugbu a, igwefoto Canon RF-mount enweghị enyo dị ọnụ ala, ụdị lekwasịrị anya ọkachamara nwere mkpado ọnụahịa na-egbu mgbu. Mana ozi ọma maka ma ndị na-agba ụta na ndị na-amu amu bụ na nke ahụ ga-agbanwe n'ezie na 2022, dịka asịrị ọhụrụ si kwuo.
'isi iyi siri ike' agwala asịrị Canon a pụrụ ịdabere na ya na 'Canon' ga-ahapụrịrị 'igwefoto ugwu APS-C RF na 2022'. Saịtị ahụ kwụsịrị ịkpọ aha ụdị ma ọ bụ nkọwa, naanị na-ekwu maka ohere nke EOS R7 nke "nwere ike dochie akara EOS M." Ma nyere asịrị ndị dị n'elu, ọbịbịa nke EOS R7 bụ n'ezie ihe kachasị njọ.
Enweela nkọwa na-arịwanye elu banyere mbata nke Canon EOS R7, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala igwefoto Canon RF-mount APS-C, ihe karịrị otu afọ ugbu a. Canon Rumors ọbụna kọrọ na Disemba 2020 na anwalelarị otu n'ime ha n'ime ọhịa wee dabere na Canon EOS R6 chassis.
Ma n'ihi igbu oge site na ọrịa na-efe efe ma ọ bụ nanị eziokwu na Canon na-elekwasị anya na Canon EOS R3 na ịgbasa oghere oghere ya, EOS R7 na-atụ anya nke ukwuu yiri ka ọ kwụsịrị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Mana ọ dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na igwefoto APS-C RF-mount ga-ada na 2022, n'ihi na Canon Rumors enyela asịrị ha ndetu asịrị na-ekwu na ọ bụ 'eziokwu'.
Ajụjụ ugbu a bụ, kedu ụdị igwefoto ọ ga-abụ na gịnị ka nke ahụ pụtara maka usoro Canon nke ugbu a EOS M? Nke ikpeazụ, nke rutere na 2012 dị ka a mirrorless ọzọ na Canon's EF-Mount DSLRs, yiri ka ọ ga-emebi. Canon na-elekwasị anya ugbu a n'ịme iko dị elu maka igwefoto RF-Mount, ọ bụ ezie na usoro EOS M ga-anọgide na-enye nhọrọ dị oke ọnụ maka ndị mbido ruo afọ ndị na-abịa.
Anyị ga-echere firmer asịrị banyere Canon EOS R7, ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie mbụ RF-n'ugwu igwefoto na a nta APS-C ihe mmetụta, ma gara aga ntule na-atụ aro na ọ ga-abụ 'a kọmpat ngwakọ nlereanya maka egwuregwu shooters. na ndị na-ese vidiyo. Ọ bụrụ na ọ dabeere na imewe na engine nke Canon EOS R6, ọ nwere ike ịbụ a uzommeputa maka Canon kasị ewu ewu mirrorless igwefoto.
Nyochaa: Igwefoto Canon na-esote-gen maka ndị nwere mmasị
Ogo sensọ na-abụkarị ihe ngosi dị mma nke ọnụahịa igwefoto na ndị na-ege ntị lekwasịrị anya, na ebe ọtụtụ ndị ọkachamara, ọkachasị ndị na-ese foto na mbara ala, na-eji igwefoto nwere obere sensọ APS-C, ọ dị mma ịsị na mbata nke Canon EOS R7 ga-emepe nkwado RF. nye ndị na-ege ntị ọhụrụ dum.
Nkọwa gara aga na-atụ aro na EOS R7 agaghị abụ ihe nlereanya ntinye, kama ọ bụ "obere EOS R6" maka egwuregwu na ndị na-agbapụ anụ ọhịa na-achọ igwefoto ngwa ngwa na ọkụ. Mana o yikarịrị ka ọ ga-abụ nke mbụ nke ọtụtụ igwefoto Canon RF-mount na-enweghị mirror, ebe ha ga-edochi akara ochie EOS M na 2022.
Kedu ihe kpatara Canon ji chọọ sistemụ igwefoto APS-C na-enweghị enyo kpamkpam? Ụfọdụ nwere ike jiri aghụghọ kwuo "ree enyo karịa," mana enwere ihe kpatara nka siri ike mere nke a ji nwee ezi uche. Nke mbụ, RF ugwu nwere nnukwu uru karịa gara aga Canon mounts, gụnyere a budata belata flange anya (ohere n'etiti oghere oghere na image ihe mmetụta) na a data ụzọ nke nwere wider swath. band. Nke a pụtara na ị nwere ike chepụta ebumnuche ọhụrụ na-agaghị ekwe omume na mbụ.
Ọ bụkwa ihe ezi uche dị na ya maka Canon na ndị na-ese foto Canon, inwe naanị otu ugwu na-enweghị mirror iji chegbuo onwe ya. Nke ahụ bụ uru Sony na-ekwukarị ya na E-mount ya, nke enwere ike ịhụ na ma APS-C na igwefoto enweghị enyo zuru oke. Nke a ga-ekwe ka Canon snappers na ndị na-emepụta vidiyo nwee igwefoto abụọ ma ọ bụ karịa na-ekerịta otu lensị ahụ.
Uru ọzọ nke sensọ APS-C bụ na ha nwere ike ịnye ogologo ogologo ogologo (na ogologo ntụsara aka dị ogologo) na obere lenses dị obere. Nke a pụtara na Canon kwesịrị imepụta iko ugwu RF kọmpat karịa, ma ọ bụ opekata mpe mepee ugwu RF nke ọma nye ndị na-emepụta oghere oghere, iji nyere igwefoto APS-C ọhụrụ ya aka ịghọta ikike ha nwere. Mana Canon EOS R7, ọ bụrụ n'ikpeazụ akpọ ya, ga-abụ nzọụkwụ mbụ na-atọ ụtọ maka onye ọ bụla na-achọ ịzụta igwefoto siri ike na kọmpat enweghị mirror na 2022.